Ndigbo bụ ndi mbụ bịara Ile-Ife-Obi Ọnịcha – hoo!haa!!
Igwe Nnaemeka Achebe, Obi nke Onịcha, bụ ya tụghapụrụ okwu a gbara ọkpụrụkpụ ụnyahụ, na mmemme Chinua Achebe International Conference nke mbụ ya nke ndi chịkọbara ya bụ ogige Institute of African Studies nke Mahadum Naịjiriya, Nsụka.
Dịka Igwe Achebe siri kwu, Ndigbo dịbụrịị tupu oge Achebe dere banyere ya, were na akọwa na enweela akwụkwọ akụkọ ọkpụ (history) pụtara ọhụrụ nke na akọwa na Ndi-Igbo bụ ndi mbụ bịara biri na Ile-Ife, bụrụkwa ha bụ ndi Oduduwa, onye tọrọ ntọala agbụrụ Yoroba zutere ebe ahụ. Ọ kọwara na nkea ka bụrụ eziokwu karịa ndọrọ ndọrọ dị n’Ala Yoroba taa n’etiti ndi Ife nakwa ndi ogbo ha ndi Ugbo.
Onye eze ọdịnala ahụ nwere oke nsọpụrụ kpọzịrị oku, ma nyekwa ndi ọkachamara na mahadum ahụ ọrụ ime nnyocha miri emi banyere ebe Ndigbo siri bịa, iji mata nke bụ eziokwu.
Gụkwuo: Anyị nile bụ ndi bịafra n’ime mmụọ anyị-Obi Ọnịcha
N’ebe ahụkwa, onyeisioche ya bụ mmemme ma bụrụkwa Gọvanọ chịburu Anambara Steeti, Dọkịnta Chukwuemeka Ezeife, jikwara ohere ahụ kpọkwaa ọkụ ka aghazigharia usoro ọchịchị ala Naịjiriya. Ọsịrị na, ” Ọ bụrụ na aghazigharịghị Naịjiriya na mpaghara isii, sị kpọọ ọgbakọ mkpebi (referendum) iji ma ma a ga-ebi, ma a ga-etisa.
Onye Nlekọta, Ogige Institute of African Studies, Ọkammụta Emeka Nwabụeze, sịrị na ha hiwere ya bụ nnukwu ezumezu iji kwanyere Achebe ugwu, ebe ọ bụ na ọ nọbu na ya bụ mahadum.
Ọkm Nwabụeze kwukwara na ogige nile ebe a na-eme Ihe Ọmụmụ banyere mba Afrịka n’ụwa nile ga -agbakọta na mahadum UNN n’ọnwa Nọvemba afọ a iji were tụpụ atụmatụ maka usoro ka mma iji ekuzi Ihe ọmụmụ banyere Afrịka
Ndi ọzọ nwere agba kwuru okwu n’oge ahụ gụnyere Gọvanọ chịburu Imo Steeti bụ Ichie Ikedi Ọhakịm, onye bụbu Mịnịsta na-ahụ maka Mmekọrịta Mba Ọzọ bụ Oriakụ Viola Ọnwụliri, tinyekwara Ichie Pit Edochie, onye bụ aka ochie na imebe ihe nkiri.
Ọkpụrụkpụ okwu nke a, onye eze ọdịnala Igbo a tọgbọrọ, bụ nke ga-etinyekwu akụkụ akụkọ ọzọ n’okwu na-arị ibe ya elu taa n’ala Yoroba n’etiti ndi ọba ha, banyere onye ka ibe ya n’ọkwa. Kedu akụkọ ọkpụ jikọrọ Ndi Igbo na ndi Yoroba? Ha abụbụ otu agbụrụ na mbụ? Sọọsọ echi nakwa nnyocha miri emi ga-eme ka a mata nke bụ eziokwu.
Next Post: Rochas chọrọ ịchị ugboro atọ site na ime ka ọgọ ya nwoke nọchie ya-Onyeagọcha